Igu qiimeeya waxa aan ahay | KEYDMEDIA ENGLISH
Sucdi waxay aheyd Gabar aad u Qurux badan, oo jalaqsan, jir iyo joog ahaanba, balse, aan dadka dhexdiisa magac qurxoon ku lahayn. — Waa Sheeko ku saabsan Isbadalka ku dhacay Bulshada, gaar ahaan Gabdhaha Soomaaliyeed oo uu diyaariyay Cabdicasiis Maxamed Shidane, tani waa qormadda Jimcadda ee arimaha Bulshada, Diinta & Suugaanta ee Keydmedia Online.
Waxaa u kiraysan guri yar oo aad loo qalabeeyay, kuna yaalla meelaha aadka u daggan magaalada, raggu aad ayey ugu soo qulqulayaan gurigaas, iyagoo leh nuuc kasta, ganacsade, siyaasi, wadaad, dhallinyaro, waayeello intaba. Waxay noqotay qof markii ey magaalada marayso aad loo qiimeeyo, maxaa yeelay, xiriirka sirta ah ee kala dhaxeeya ragga isku muujiya in ey yihiin magafayaal ayaa waxuu siinayaa qaddarin iyo qiimayn gaara, marka laga reebo lacagta faraha badan ee ey ka tabacday ka ganacsiga jirkeeda. Waxaa u sii dheereed isticmaalka maan-dooriyaasha, taas oo ey u keeni jireen rag bulshada ka dhex muuqda.
Waxay isku haysatay in ey daawo iyo xal u tahay raggaan faraha badan ee walaaca iyo walbahaarku ku furanyahay, ee iyada ugu imaada nasashada iyo in ey buuqa iilloobaan xoogaa. Sucdi iyada oo og in ficilkeedu ey dhibsanayaan dad badan misana waxay qirsantahay in 90% in ey raggu ku qanacsanyihiin, iyaduna isku qanacsantahay, cidna eysan wax u dhibin, xukminta dadka kalana ey iska dhaga tirto, una noolaato qaabka y jeceshahay, iyadoo nafteeda been ka sheegin, beenna u sheegin.
Qormaddaan waxaa markii ugu horeysay lagu soo daabacay bogga Keydmedia Online sanadkii 2014.